နိုင်ငံခြားသူပြော တဲ့ ဖြစ် လာနိုင် တဲ့ အရာတွေ အတွက် ဘာ မှ ပြင်ဆင်မထား တဲ့ ရန်ကုန်ေ လဆိပ် – Shwewiki.com
ကျွန် မ ဘန်ကောက်ကတဆင့် ချင်းမိုင်ကို သွားဖို့ အခု ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ရောက်နေပါတယ်။ ကျွန်မ ပတ်စ်ပို့စ်ကို စစ်တဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ဝန်ထမ်းက ဘာအကာအကွယ်မှ မပါဘဲ နှာချေ၊ချောင်းဆိုးနေလို့ သူနဲ့ သူ့အဖော်တွေကိုပါ လက်သန့်ဆေးသုံးဖို့ ၊ မျက်နှာဖုံးတပ်ဖို့ သေချာတိုက်တွန်းခဲ့ရတယ်။
ဒီ မှာတော့ ဘယ်သူမှ လက်သန့်ဆေးတွေ သုံးနေတာ မတွေ့ရဘူး။ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေကော၊လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေကောပဲ။ သူတို့တွေကို တာဝန်ရှိသူတွေက ထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလေဆိပ်မှာ ဘာဆေးဆိုင်မှ မရှိတာကော သိလား? ဒီက လူ့တချို့နဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ သူတို့အထက် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ သူတို့အတွက် အခြေခံကျတဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ၊ လက်သန့်ဆေးတွေ ထောက်ပံ့ပေးသင့်တယ်လို့ တညီတညွတ်တည်း ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး အခြေခံပညာပေးရောပေါ့။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက် မြန်မာ ဘာမှ မပြင်ဆင်ထားဘူး။”
ကြှနျ မ ဘနျကောကျကတဆငျ့ ခငျြးမိုငျကို သှားဖို့ အခု ရနျကုနျလဆေိပျမှာ ရောကျနပေါတယျ။ ကြှနျမ ပတျဈပို့ဈကို စဈတဲ့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးက ဝနျထမျးက ဘာအကာအကှယျမှ မပါဘဲ နှာခြေ၊ခြောငျးဆိုးနလေို့ သူနဲ့ သူ့အဖျောတှကေိုပါ လကျသနျ့ဆေးသုံးဖို့ ၊ မကျြနှာဖုံးတပျဖို့ သခြောတိုကျတှနျးခဲ့ရတယျ။
ဒီ မှာတော့ ဘယျသူမှ လကျသနျ့ဆေးတှေ သုံးနတော မတှရေ့ဘူး။ လဆေိပျဝနျထမျးတှကေော၊လယောဉျဝနျထမျးတှကေောပဲ။ သူတို့တှကေို တာဝနျရှိသူတှကေ ထောကျပံ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒီလဆေိပျမှာ ဘာဆေးဆိုငျမှ မရှိတာကော သိလား? ဒီက လူ့တခြို့နဲ့ စကားပွောကွညျ့တော့ သူတို့အထကျ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ သူတို့အတှကျ အခွခေံကတြဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှေ၊ လကျသနျ့ဆေးတှေ ထောကျပံ့ပေးသငျ့တယျလို့ တညီတညှတျတညျး ပွောကွတယျ။ နောကျပွီး အခွခေံပညာပေးရောပေါ့။ ဖွဈလာနိုငျတဲ့အရာတှအေတှကျ မွနျမာ ဘာမှ မပွငျဆငျထားဘူး။”
ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကရှင်းပြ တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ